Sawirro: Ciidanka Gorgor oo dilay xubno Al-Shabaab ah | Arrimaha Bulshada
Home News Sawirro: Ciidanka Gorgor oo dilay xubno Al-Shabaab ah
Sawirro: Ciidanka Gorgor oo dilay xubno Al-Shabaab ah
Wednesday, December 22, 2021 News
Bulsha:- Faah-faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howl-gal qorsheysan oo ciidamada Gorgor ay ka sameeyeen duleedka degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose, kaas oo ay ku beegsadeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
Ciidamada Gorgor ayaa lagu soo warramayaa inay gudaha u galee deegaanada Shaamgare, Mubarak iyo Jowhar yarey, waxaase iska caabin ay kala kulmeen kooxda Al-Shabaab.
Taliyaha guutada Gorgor Coll Dayax Cabdi Cabdulle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay Al-Shabaab kala wareegeen deegaanadaas isla-markaana ay joob xoogan gaarsiiyeen.
Dayax Cabdi Cabdulle ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in howl-galka ka dhacay deegaanka Shaamgare ay ku duleen illaa 5 xubnood, kuna dhaawaceen 7 kale.
Sidoo kale wuxuu intaasi kusii daray inay sii wadi doonaan dhaq-dhaqaqyada ay haatan ka wadaan agagaarka degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka kooxda Al-Shabaab oo inta badan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ka fuliso halkaasi.
Xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana labada dhinac ay wadaan abaabul xoogan iyo dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeedo.
Si kastaba, muddooyinkii u dambeeyey ciidamada Xoogga dalka ayaa sare u qaaday howl-gallada lagula dirirayo Al-Shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.